app များကို apk အပေါ်ရရှိနိုင်စွန့်စားမှုပျော်စရာ & ဂိမ်းများ Apps ကပဟာ android apk
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အဖြစ်အပျက်
Category: - စွန့်စားမှု
ဂိမ်းများကိုဒီပုံစံအခြေခံအားဖြင့်အရေးယူမှုဂိမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကနှေးကွေး-ပွေးညီနေကြသည်။ ကပဟေဠိများနှင့်တူးဖော်ရေးဖြေရှင်းရေးအပေါ် အခြေခံ. အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဇာတ်ကောင်များ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူစေ့စပ်ကစားသမားစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အမျိုးအစားအဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကြောင်း-based ရုပ်ရှင်, မီဒီယာနှင့်စီးရီးအားဖြင့်မှုတ်သွင်းသောဇာတ်လမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ကဇာတ်ကောင်များနှင့်ဇာတ်လမ်းအပေါ်အလေးပေးအဖြစ်စွန့်စားမှုဂိမ်းတစ်ခုတွေအများကြီးအဓိကအားဖြင့်တဦးတည်းကကစားသမားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးစွန့်စားမှုဂိမ်းဟာ 1970s နှင့် 1980s စာသား-based ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ဂိမ်းများကိုဤအမျိုးအစားများကိုစွဲငြိဖွယ်ရာဂရပ်ဖစ်နှင့်သင့်ထိုင်ခုံရဲ့အစွန်းပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ့်အသေးစိတ် storyline ဆံ့။ သူတို့ကသော့ခတ်တံခါးများဖွင့်လှစ်မက်ဆေ့ခ်ျအားကုဒ်ဖြုတ်, အသုံးပြု. နှင့်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေတာ, ဒါမှမဟုတ်အသစ်သောနေရာများတွင်ရှာဖွေစူးစမ်းတူသောပဟေဠိအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်တစ်ဦးပဟေဠိဖြေရှင်းတဲ့အခါ, သင်ပိုမိုဒေသများသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ဇာတ်လမ်းပိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည်။
mechanics ရဲ့ကစားသမားများ၏ဆင်ခြင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဘယ်မှာယုတ္တိဗေဒပဟေဠိလည်းရှိပါတယ်။ အတော်များများကစွန့်စားမှုဂိမ်းသူတို့ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ခဲ့ရဘူးမှ Walking Dead စီးရီးအဖြစ်အခြေအနေများ၏အခြေခံပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်များစေနိုင်သည်ရှိရာကစားသမားတစ်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကဆက်ကပ်။ ဂိမ်းများကိုဤအမြိုးအစား၏အဓိကရည်မှန်းချက်တာဝန်ပေးအပ် task ကိုအပြီးသတ်ဖို့ပါပဲ။ အဓိကကျရှုံးအခြေအနေကစားသမား၏အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျသစ်ကိုဒေသများတွင်ရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်ပဟေဠိဖြေရှင်းနေစဉ်ခန်းနှင့် labyrinth မှလွတ်မြောက်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာတချို့စွန့်စားမှုဂိမ်းရှိပါတယ်။ ဤအဂိမ်းများကိုအတွက်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအပြန်အလှန်ရှိပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်ယုတ္တိဗေဒပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်နှင့်အခြားအခန်းပေါင်းဖို့လမ်းစေရန်အရင်းအမြစ်များကိုကန့်သတ်ထားရှိသည်။ ဂိမ်းများကိုဒီပုံစံကယ့်ကိုသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်သင့်စိတ်ကိုစိန်ခေါ်။
စစ်မှန်သောဘဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အခြေခံထားတယ်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝတူအောင်ဖန်တီးနိုင်သည်ကိုသငျသညျကစားနိုင်ပါတယ်ဂိမ်းများကို simulator လည်းရှိပါတယ်။ သင်ပတ်ဝန်းကျင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကစားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Walking Dead: တစ်ဦးကနယူး ...
ဆုံးရှုံးသွားသောလေပြေ in: တစ်ဦးကဝမ်းနည်းပုံပြင် ...
စူပါ Bino Go ကို - နယူး ...
Gangstar ဂတ်စ် - မာဖီးယား ...
ငါးမန်း Boy သေနတ်သမား
White ကမိန်းကလေး Ninja
White ကကြံ့ Dash
Robo Shoot နှင့် Jetpack
ပျံ Monster ရန်သူများ
Pro ကို SnowCross ဟေးလ်ပြိုင်ကားသမား
Offroad 4X4 ကားသေနတ်သမား Rush